Kiis xaday ayaa dhigaya Aqoonsiga Taabashada gadaashiisa hore ee iPhone 8 | Wararka IPhone
Kiis xaday ayaa dhigaya Aqoonsiga Taabashada gadaasha hore ee iPhone 8
Waxaan kula soo noqonay wararkii xanta ahaa iyo xatooyada wixii iPhone 8, iPhone X ama wax kasta oo Apple ugu yeerto ay na keeni karaan. Munaasabaddan, waxa shaandhaynta shabaqa ku jira waa sawir gebi ahaanba hufan oo hufan kaas oo si cad loogu arki karo taas gadaalku fursad uma laha in lagu daro Aqoonsiga Taabashada.
Xaaladdan oo kale, waa in la yiraahdaa waa kiis taas waxay si cad u calaamadeyn kartaa ama u qeexi kartaa naqshadeynta sii socota ee qaabka iPhone-ka soo socda hadaan xoogaa diirada saarno faahfaahinta inteeda kale marka laga reebo maqnaanshaha godka si Aqoonsiga Taabashada looga isticmaali karo gadaasha.
Markaad fiiriso sawirka, waxa iska cad inuu yahay qayb ka mid ah kaamirooyinka ayaa si xaqiiqo ah loo dhigi doonaa si qumman oo aan si qotodheer lahayn sida ay yihiin ilaa maanta. Tan oo isticmaaleyaal badani aysan jeclayn waxay leedahay sabab cad oo isbeddel ah, sida caadiga ah sawirada iyo fiidiyowyada waxaa lagu qaadaa iPhone-ka si siman, marka marka aad isku shaandheyso isla kamaraduhu waa "khaldan yihiin" haddii ay beddelaan booskooda mid Marka aan dhigno iPhone muuqaal ahaan, kaamirooyinka si fiican ayaa loo meeleyn doonaa.
Muuqaalka guud ee kiiska wuxuu umuuqdaa inuu sifiican ula jaanqaadi doono iPhone 7-ka hada jira, godadka afhayeenka iyo makarafoonka hoosta, badhamada dhinaca iyo kore ama booska iskuxiraha waxay umuuqdaan kuwa aan kujirno dhab ahaansho. Tani Waxay naga dhigaysaa inaan la yaabno haddii Apple runti ay soo saari doonto qaabkan si ka duwan sidii aan dhammaanteen rajeyneyno ama waxay noqon doontaa iPhone 7S iyo 7S Plus in sharciga buuxa.
Ugu dambeyntiina, Aqoonsiga Taabashada ee kiiskan looma isticmaali karo dhabarka. oo sidaas darteed qaar ka mid ah qorshayaasha qarsoon ilaa maanta waxba ma ahan. Sidoo kale ma dhihi karno in kiiskan uu ka yimid Apple sidaa darteedna aysan macquul aheyn in wax si rasmi ah loo xaqiijiyo, laakiin kaalay, in wararka xanta ah, dusaya iyo kuwa kale, aysan hoos u dhicin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone X » Kiis xaday ayaa dhigaya Aqoonsiga Taabashada gadaasha hore ee iPhone 8
Waxay yiraahdaan kaamirooyinka waxaa loogu talagalay xaqiiqda dhabta ah
Jawaab Kyro Blanck
Hal-abuur la’aan? Abkaani wuxuu ku darayaa weedh -waxbadan ama kayar-macnaha guud ee sawirradaada
Apple wuxuu cusbooneysiiyaa wallpaper iCloud.com